प्रचण्ड र भट्टराईबीच नयाँ बहस::netpatrika
प्रचण्ड र भट्टराईबीच नयाँ बहस
पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने ? विचार मन्थन हुँदै थियो । त्यहीबेला नेता भट्टराईले ‘नयाँ शक्ति’ बनाउने विचार सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिले अर्को मोड लियो । दाहालले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गरे ।
भट्टराईको ‘शक्ति’ को अस्त्र सीधै दाहालतर्फ लक्षित थियो । नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यो हतियार सोझ्याइएको थियो । करिब तीन दशकदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका भट्टराईले नवउदारवाद र समाजवादबीच ‘फ्युजन’ गरी माक्र्सवादको व्याख्या गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । दुवै सिद्धान्तका ‘सकारात्मक’ पक्ष लिएर नेपाली परिवेशअनुसार माक्र्सवादको विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसलाई दाहाल पक्षले ‘गैरमाक्र्सवादी’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।
दाहाल र भट्टराईबीच राजनीतिक क्रान्तिलाई जोड दिने कि आर्थिक क्रान्तिलाई भन्नेमा मतभेद देखिन्छ । दाहाल अझै ‘बलपूर्वक’ राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता हुन सक्ने मान्यतामा छन् भने भट्टराई गणतन्त्र आइसकेकाले आर्थिक क्रान्तिमा केन्दि्रत हुनुपर्ने पक्षमा छन् । मुलुकमा ०४६ पछि भित्रिएको नवउदारवादी नीतिका आधारमा पुँजीवादको विकास गर्ने उनको विचार छ । ‘पुँजीवादको विकास गरेपछि मात्र समाजवादको तयारी हुन्छ, समाजवाद उन्मुख पुँजीवाद अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भन्दै आएका छन् ।
दाहाल भट्टराईको तर्क मान्ने पक्षमा छैनन् । उनी राजनीतिक क्रान्ति पूरा नभई आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुलाई विचलन आएको ठान्छन् । फुटेर गएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीसँग प्रस्तावित एकता गर्नका निम्ति पनि राजनीतिक क्रान्तिको मान्यता उनले छाडेका छैनन् । दुइटा माओवादी एकीकृत नभई दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्, उनी ।
भट्टराईको बहसले प्रस्तावित एकतालाई असर पार्ने संस्थापन पक्षधरको बुझाइ छ । ‘नवउदारवाद र माक्र्सवादको फ्युजन गराउने भनेको के हो ? स्पष्ट हुनुपर्‍यो,’ दाहाल निकट नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘अर्को कुरा, नवउदारवाद र माक्र्सवादलाई एमालेले मिसाइसकेको छ, हामी त्यो गर्न सक्दैनौं ।’
राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति अलग-अलग विषय हुन नसक्ने दाहाल पक्षको तर्क छ । दुवै क्रान्ति एकैपटक सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने उक्त पक्षको भनाइ छ । ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन, त्यसकारण हाम्रो जोड यसमै हुन्छ,’ गजुरेलले भने ।
नेता भट्टराईले शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयका एमबीए अध्ययनरतसँग अन्तक्रिर्यामा युवा-विद्यार्थीलाई आर्थिक क्रान्तिमा लाग्न आग्रह गरे । ‘म राजनीतिक क्रान्तिमा लाग्नैपर्छ भन्दिनँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘आर्थिक क्रान्तिमा भने अवश्य लाग्नुस् ।’
त्यहाँ उनले नेपालमा आर्थिक विकासबारे करिब एक घन्टा बोले । ‘आर्थिक विकासका लागि पुँजीवाद र समाजवादका सकारात्मक कुरा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलुक संक्रमणकालमा भएकाले अपनाउने मोडेल पनि यही हो ।’ दुई छिमेकी देश चीन र भारतबाट आर्थिक विकासका उपाय सिक्नुपर्ने पनि उनले जनाए ।
भट्टराईको विचार सिद्धान्ततः नमिल्ने एमाओवादीका अन्य वरिष्ठ नेताको भनाइ छ । ‘पुँजीवाद र समाजवादलाई सँगै लिएर जान सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन,’ पाका नेता सोनाम साथीले भने, ‘यो विचार पनि होइन, सोभियत संघ विघटन भएपछि यो कुरा उठेको थियो ।’ कान्तिपुर